true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 16 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
16.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Lapho umuntu engakwazi ukwenza umqondo wakhe komunye umuntu, iqembu, i-organization noma iphrojekthi, kunesimo Sokungabaza.
Isibonelo, intokazi ayikwazi ukwenza umqondo wayo phakathi kwemisebenzi emibili. Njengamanje usebenza njengothisha okuyinto ayithola izuzisa kakhulu futhi ijabulisa. Unguthisha omuhle kakhulu. Unikezwe umsebenzi endaweni yokucima ukoma yendawo lapho angenza khona imali ethe xaxa. Angathanda ukuthola imali ayinikwa e-bar. Owesifazane usebenzisa Isimo Sokungabaza ukumsiza ekwenzeni isinqumo esingcono kakhulu.
IFomula Yokungabaza yile:
Zazise ngokweqiniso izinhloso zangempela nemisebenzi yalelo qembu, iphrojekthi noma i-organization, ngaphandle kokulalela imibono engalungile noma amahlebezi.
Hlola izibalo zokubonisa isimo zomuntu ngamunye, iqembu, iphrojekthi noma i-organization.
Nquma ngesisekelo senzuzo enkulu kakhulu yenani elikhulu labantu nezindawo zempilo yakho, ukuthi kufanele ihlaselwe, ilinyazwe, ivinjelwe noma isizwe noma cha. Ukwenza lokhu, bheka ukuthi kuzokwenzekani kuzo zonke izingxenye zempilo (impilo yakho yangasese, umyeni wakho noma unkosikazi wakho nomndeni, amaqembu eningaphansi kwawo, Isintu, izinto eziphilayo, izinto zenyama, kanye nezikamoya izindaba nobudlelwano bakho noNkulunkulu).
Cabanga ngokucophelela futhi uthathe isinqumo ngawe noma ngeqembu lakho, iphrojekthi noma inhlangano ngokuqondene nezinhloso nezinhloso.
Cabanga ngokucophelela bese wenza isahlulelo mayelana nezibalo zokubonisa isimo zakho noma zeqembu lakho, lephrojekthi noma lenhlangano.
Joyina noma uhlale noma ube ngumngane walowo othuthukela kwinzuzo enkulu yenamba enkulu kunazo zonke bese umemezela iqiniso obala ezinhlangothini zombili.
Yenza konke okusemandleni ukuthuthukisa isenzo nezibalo zokubonisa isimo zomuntu, iqembu, iphrojekthi noma inhlangano osele kuyo noma oyijoyinile.
Bhekana nezimo eziseqenjini elisha uma usushintshe izinhlangothi, noma izimo zeqembu osele kulo, uma ukungabaza kwehlise izinga lenhlonipho nokubaluleka onalo neqembu.